Baarlamaanka oo su’aalo adag weydiiyay wasiirka garsoorka ee xukuumadda Soomaaliya – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Baarlamaanka oo su’aalo adag weydiiyay wasiirka garsoorka ee xukuumadda Soomaaliya
Xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta kullan ku yeeshay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa waxay su’aalo adag ku weydiiyeen wasiirka garsoorka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji.
Kullanka maanta ee uu shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa waxaa soo xaadirtay illaa 152 xildhibaan, waxaana qodobada looga hadlay ka mid ahaa qorshaha xukuumadda ee dhismaha guddiga adeegga garsoorka.
Wasiirka garsoorka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo maanta hortagay xildhibaanada baarlamaanka ayaa uga warbixiyay qorshaha ay xukuumadda Soomaaliya ku dooneyso inay kusoo dhisto guddiga adeegga garsoorka, kaasoo muddo badan aan lagu guuleysan in lasoo dhiso.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inaysan haatan suurto-gal ahayn in lasoo dhiso guddiga adeegga garsoorka, iyadoo aan marka hore la helin hay’adihii ka midka noqon lahaa.
Illaa iyo haatan lama oga go’aanka kama dambeyska oo uu baarlamaanka Soomaaliya ka qaadan doonno arrinta dhismaha guddiga adeegga garsoorka ee dalka, xilli uu wasiirka garsoorka sheegay inay sida ugu dhaqsiyaha badan guddigaasi lagu soo dhisi doonno.